Blaogera Tamouls: Fambolena, Teatra An-dalambe Ary Ankizy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Oktobra 2017 5:46 GMT
Firenena 187 no nanamarika ‘ny andron'ny tany’ tamin'ny 22 aprily 2007. Tamin'io volana io, nahazo blaogera vaovao izahay tamin'ny tontolon'ny blaogy tamoul, mitondra ny lohateny hoe ‘iyarkai vivasaaya‘ na ‘fambolena ara-ekolojika’ ilay blaogy. Ao anatin'io blaogy io, miresaka mikasika ireo fanatontosana tsy nisy toa azy i Samsari, ireo mpamboly nahazo fandresena, ny tekinikan'izy ireo ary ireo fanontaniana mifandraika amin'ny fambolena tao Tamil Nadu (TN), India.
Atolony ho antsika ny ‘Tantsaha ‘Laharana Voalohany tao Tamil Nadu, India. Anthonysami avy ao Puliyangudi, faritra ao Thiruneveli, ao Tamil Nadu, nanao fikarohana lalina mikasika ny fampiasana araka izy tratra ny rano amin'ny fambolena fary. Mamboly voasary makirana eo amin'ny velarantany 60 acres (eo amin'ny 25 hektara latsaka eo ho eo) sy fary amina velarantany 60 acres i Anthonysami. Araka ny voalazany, mampiasa rano manodidina ny 20.000 hatramin'ny 22.000 litatra eo ireo mpambolin'i TN mba hamokarana siramamy iray kilao. Kanefa, eo anelanelan'ny 1.500-1.800 litatra eo monja no rano ampiasain'i Anthonysami mba hamokarana vokatra mitovy amin'io ihany.
Mampiasa fampidiran-drano i Anthonysami amin'ny alalan'ny tata-drano ary mampiasa ireo fomba manokana hiasana tany sy hambolena fary elanelanina amin'ireo legioma fantatra fa mitondra azota. Zezika organika fotsiny no nampiasainy. Mampitombo ireo kankana sy ireo zavamaniry hafa mahasoa ireo fomba ampiasain'i Anthonysami, mampangatsiatsiaka ny tany izany, izay tsy dia mitaky rano be loatra.
Mamporisika ireo olona liana mba hitsidika an'i Anthonysami i Samsari ary manome ihany koa ny adiresy elektronikany, raha toa misy olona te-hiarahaba azy. xavierukr@yahoo.com.
Ao anaty lahatsoratra iray hafa, miresaka mpamboly iray hafa izay mety tara-pahazavana ho an'ireo olona hafa i Samsari. Bernard Clark, avy any Belzika nipetraka any India ary monina ao Arvinda Ashram ao Auroville, Pondicherry. Tamin'ny fahatongavany tao, nomena sombin-tany kely 3 acres i Bernard Clark ary nangataka raha toa ka azony avadika ho faritra fambolena hazo io sombin-tany io. Tany mena ngazana feno vato ilay sombin-tany ary na dia ranonorana mandritra ny telo volana aza tsy ho ampy hahamando azy. Nanaiky ny fanamby i Bernard Clark ary tao anatin'ny dimy taona monja dia voavadiny ho lasa paradisa ilay sombin-tany.
Misafidy ireo hazo haingam-pitombo izy mba tsy dia handaniana rano be loatra. Ary ireo hazo mandatsaka ravina betsaka no safidiany. Mahatonga ny tany ho lonaka ireo ravina ireo sady mamporisika ireo singa ilaina hitombo mba hamokaran'ny tany. Amin'izao fotoana izao i Bernard Clark mamboly akondro, gombo karazany efatra, baranjely, voatabia, ireo sakay, voatavo monta, papay ary koa mananasy miaraka amina zava-mndravina (bozaka). Ny toro-hevitr'i Bernard Clark voalohany dia ny fanaovana lavaka kely maromaro, izay hahafahan'ny ranon'orana hiandrona. sady hametrahana izay rehetra mety ho lo.
Miainga eto dia hitsangatsangana lavidavitra kely isika ary ndeha hanatrika tantara vitsivitsy eny andalam-ben'i Azhiyuran any Tirunelveli, TN, India. Nahita tantara roa nolalaovin'i Pralayan sy ny tariny i Azhiyuran, ‘teatra andalam-ben'i Chennai’. Lazain'i Azhiyuran fa ny tantara faharoa mitondra ny lohateny hoe ‘payanam’ na fitsangatsanganana dia miresaka ireo tambanivohitra mifindra monina eny an-tanandehibe mba hitady fiainana. Etsy ankilany, vokatry ny fanorenana tanàna, maro ireo asa vaovao no niforona ao andrenivohitra ary etsy ankilany ireo ‘Dalits’ nahita fianarana tsy maintsy mipetraka any an-tanandehibe mba handositra ireo habibiana mifototra amina foko. Resahan'ilay tantara ny amin'ireo tambanivohitra tsy maintsy mifindra monina any an-tanandehibe – ireo olana atrehiny any an-tanandehibe, ny fomba fitondra tsy araka ny maha-olona ataon'ireo tompon'andraikitra- singanina amin'izany ireo mpitandro filaminana sy ireo mpanao politika. Nanodidina teo amin'ny 12.30 ora no nanombohan'ny tantara faharoa ary nifarana tamin'ny 2.20 maraina. Nijanona tao ny ankamaroan'ny mpijery araka ny voalazan'i Azhiyuran. Tsy nampiasa fampielezam-peo mihitsy ilay tarika mpanao teatra an-dalambe ary ireo hira izay nohirainy dia tena nahasarika tokoa ny mpihaino.
Azhiyuran Miteny i Azhiyuran fa tsy misy manohina ny fon'ireo olona ireo mihoatra noho ny teatra an-dalambe. Rehefa miresaka sy misavasava ravina ireo olana izay atrehin'ny olona iray ny endrika zavakanto iray, eny fa na manoloana ny varavarany aza, mafy ny fiantraikan'izay. Ao anatin'ny teatra an-dalambe, tsy vitan'ny hoe mopanatrika tsotra fotsiny ny mpanatrika, fa sady mandray anjara ihany koa. Tsy misy ny elanelana eo amin'ny mpisehatra sy ny mpanatrika. Ny fitalahoana, ‘moa ve tsy misy olona afaka miresaka ny fiainako, ny politikako, ny halehibeko, ny henatro?‘, izany no fanontaniana mipetraka ao an-dohan'ireo olona an-tapitrisany. Ary ny teatra an-dalambe angamba no mety ho valin'izany hoy i Azhiyuran.
Miresaka ireo mpianatra sy mikasika ireo sekoly izay toa tsy mba mamporisika ny fanabeazana akory ny tantara voalohany notontosain'ilay mpanao teatra an-dalambe. Ny fampianarana tsianjery no fomba atao amin'ny ankapobeny. Ary naseho tamin'ny fomba tena mahomby ny fijalian'ireo fanahy mpiampànga. Ilay tantara 50 minitra dia mifototra amina asa iray noforonin'ny sainI'i ra.Natarajan ary nomena ny lohateny hoe ‘Ayisha’.
Raha toa ireo ankizy no lohahevitry ny tantara iray nolalaovin'ny andiana teatra an-dalambe tany amin'ny tendrony atsimon'i India, ny tantara holalaovina ao Nithari kosa dia tena mbola hampalahelo lavitra. Fa fotsiny, tantara tsy noforonin'ny saina ilay izy. Ireo ankizin'i Nithari ireo ihany no mety holalao ilay tantara. Misy eo amin'ny 50 eo ireo ankizy ary ny sasantsasany amin'izy ireo dia tena manambaka ny fahafatesana mihitsy. Hahakasika ireo zavatra nosedrainy no asehon'ity tantara ity. Hifantoka amin'ny fahamarinana tsy nampamiratina, izay tsy niverenan'ny ampahany amin'ireo namany mandrakizay. Mey handray anjara amin'ny fanoratana, ny fitarihana ary ny fiakarana an-tsehatra vitsivitsy ihany koa ireo ankizy. Vao tsy ela akory i Mangai avy ao New Delhi, India, no nitsidika an'i Nithari ary nahita ilay tantara. Resahany ny fihetsehampo asehon'ireo ankizy niakatra an-tsehatra sy nilalao ny tantara, ny fahombiazan'izy ireo – indrindra indrindra fa ilay sehatra farany tsy an-kiteny na kely aza. Mihevitra ihany koa izy hoe ahoana no tsy maintsy nanendrena ireo ankizy ireo, mba hanatanterahana ny tantara toy io, ireo ankizy ireo ihany izay tsy iza fa vao volana vitsivitsy izay no nilalao valala sy nandefa papango rivotra.